Ọkụ Agbarikọọla Ahịa Akụrụngwa E Ji Arụ Ụlọ n'Ogidi
Anyammiri gbara nnọọ ka iju mmiri n'ụtụtụ ụbọchị Wenezịdee dịka ọkụ ọnụ ụtụtụ dabìdòrò ma gbarikọọ ahịa ahụ na-ewu èwù a na-ere akụrụngwa e ji arụ ụlọ na ya dị n'Ogidi dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Idemili North nke steeti Anambra.
Ndị Uwe Ojii Anambra Anwụchikọọla Ndị Òmèkóòmè Karịrị Otu Narị
Igbo sị na ọ bụrụ na a pịaghị ngwere ụtarị, ọ naghị ama na ọ gbà ọtọ, ma sịkwa na ọ na-abụ a na-etiwu, ọ ka na-arịsịta, ị mara na ihe a na-etinwu agwụbeghị ebe o si apụta. N'ịgbaso nke a, ndị uwe ojii steeti Anambra anwụchikọọla ma kpụgharịa mmadụ dị otu narị, iri abụọ na abụọ n'ọnụ ọgụgụ maka itinye aka na mpụ, arụrụala na omekoome ndị ọzọ dị iche iche.
Ọnwụ bụ ọzọ a mà na onye ọbụla ga-echirịrị, ma bụrụkwa òkù a ma na onye ọbụla dị ndụ ga-azarịrị chi ya oge ọbụla o jiri kpọọ ya. Nke a bụ isi sekpụ ntị n'okwuchukwu ofufè nro akwamozu Nze Cyril Igwe, bụ nke weere ọnọdụ nso-nso a n'ezinụlọ be ya dị n'Ebenatọr, n'okpuru ọchịchị ime obodo 'Nnewi South' nke steeti Anambra.